ကြေးနန်း ICO အစီအစဉ်များ - Blockchain သတင်းများ
ကြေးနန်း ICO အစီအစဉ်များ
ကြေးနန်းချက်တင် cryptocurrency များအတွက် Multi-ဒေါ်လာဘီလီယံ ICO စီစဉ်ထား
ကြေးနန်း၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် blockchain ပလက်ဖောင်းနှင့်ဇာတိ cryptocurrency ကိုဖွင့်ဖို့စီစဉ်ထား encrypted စာပို့ခြင်း startup, ယင်း၏ချက်တင် app နဲ့ကျော်လွန်အပေါ်ငွေပေးချေမှု powering. TechCrunch မှပြောပြီရာမျိုးစုံသတင်းရပ်ကွက်အဆိုအရ, သည် "ကြေးနန်းပွင့်လင်းကွန်ယက်" (တန်ချိန်) သစ်တစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်, သာလွန်စွမ်းရည်နှင့်အတူ blockchain '' တတိယမျိုးဆက် '', Bitcoin ပြီးနောက်နှင့်, နောက်ပိုင်းတွင်, Ethereum လမ်းခင်း.
အဆိုပါပစ်လွှတ်တစ်ခုကြီးမားကနဦးအကြွေစေ့ယဇ်နှင့်အတူငွေကြေးထောက်ပံ့ပါလိမ့်မည်, လာမည့်ပုဂ္ဂလိက Pre-ရောင်းအားသန်းပေါင်းများစွာ၏ရာပေါင်းများစွာသို့အထိနှင့်အတူ, အလားအလာကြောင့်ယနေ့အထိအကြီးဆုံး ICOs များထဲမှအောင်. ဝယ်လိုအားအစား ICO ထက်လတ်ဆတ်တဲ့ startup ကနေလာမယ့်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမောင်းနှင်နေသည်, ကြေးနန်းကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုတဲ့ရေတွင်း-ထူထောင်စာတိုပေးပို့ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်ပါသည်.
တစ်ပြည်တွင်းဖြစ် cryptocurrency ချမှတ်မည်သည့်အစိုးရသို့မဟုတ်ဘဏ်ထံမှကြေးနန်းရဲ့ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်ကြီးမားသောလွတ်လပ်ရေးပေးနိုင်ကြောင်း - ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူ၏နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီလွှဲပြောင်းယူပြီးနောက်တစ်ခုခုတွဲဖက်တည်ထောင်သူနှင့် CEO ဖြစ်သူ Pavel Durov တပ်မက်ဖို့လူသိများသည်, ရုရှားလူမှုကွန်ယက် VK. Durov ဒီဇာတ်လမ်းကိုနှင့် ပတ်သက်. သူ့ကိုဆက်သွယ် TechCrunch ရဲ့အများအပြားကြိုးစားမှုမှတုန့်ပြန်မထားပါဘူး.
တစ်ကျယ်ပြန့်လက်ခံကျင့်သုံး messaging app ထဲမှာ cryptocurrency များအတွက်အလားအလာကြီးမားသောဖြစ်ပါသည်.
ကြေးနန်းအတွင်းပိုင်း cryptocurrency powered ငွေပေးချေမှုနှင့်အတူ, အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနယ်နိမိတ်ကိုဖြတ်ပြီးရံပုံငွေပေးပို့ခြင်းလာသောအခါသုံးစွဲသူများကငွေလွှဲဝန်ဆောင်ခကျော်လွှားနိုင်, ပိုက်ဆံခု၏ app ကိုဖွင့် encryption ကိုမှပုဂ္ဂလိကပိုင်ကျေးဇူးတင်စကားရွှေ့, ခရက်ဒစ်ကဒ်အခကြေးငွေများလွန်းမြင့်မားခံရမယ်လို့ micropayments မကယ်မလွှတ်, နှင့်ပိုပြီး. ကြေးနန်းပြီးသားကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ cryptocurrency အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်က de facto ဆက်သွယ်ရေးလိုင်းကိုဖြစ်ပါသည်, ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အကြွေစေ့နှင့် Blockchain မှသဘာဝနေအိမ်အောင်.
ကြေးနန်းသလောက်ပြုစုပျိုးထောင်စဉ်းစားခံရဖို့နားလည် $500 ၏အကွာအဝေးအတွင်းအလားအလာစုစုပေါင်းလက္ခဏာသက်သေတန်ဖိုးကိုမှာ Pre-ICO ရောင်းချရန်အတွက်သန်း $3 ဘီလီယံအထိ $5 ဘီလီယံအထိ. သို့သျောလညျး, သူတို့အားကိန်းဂဏန်းများ ICO မတိုင်မီပြောင်းလဲသွားနိုင်, အဖြစ်မကြာမီမတ်လအဖြစ်လာနိုင်တဲ့အရာ. သူများသည်ကိန်းဂဏန်းများ Tezos ပြီးနောက်ဖြစ်နိုင်သည်ယနေ့အထိအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂလိက crypto လစာတိုးလုပ်လိမ့်မယ်, အရာကျော်ကြီးပြင်း $230 သန်းဇူလိုင်လအတွက်.
တစ်ဦး ICO တစ်ဦး Pre-ရောင်းချရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်နိမ့်ဆုံးထုပ်ဖြစ်ပါသည် (တစ်ခါတစ်ရံတွင်အထူးလျှော့စျေးနှင့်အတူ) ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ရန် ('ဝေလငါးများ') လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှတစ်ဦးပိုမိုကျယ်ပြန်လက္ခဏာသက်သေရောင်းချခြင်းမပြုမီ. အများပြည်သူ, သေးငယ်တဲ့ခု၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူမျိုး၏ရှည်လျားသောအမြီးစရာရှိသောကြောင့်တစ်ဦး ICO ၏လက်လီအဆင့်လျော့နည်းပြုစုပျိုးထောင်လေ့. သို့သော်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူ ICO Front-loading လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်ယုံကြည်မှုစိတ်အား.
သူများသည် Pre-ရောင်းချရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိမ့်ဆုံးဝယ်-in ကိုနေရာချရန်လိုအပ်မည်အကြောင်း, $20 သန်းသူတို့ Durov ရဲ့အတွင်းစိတ်စက်ဝိုင်းပြင်ပရောက်နေပါလျှင်. သတင်းရင်းမြစ် ICO ဝယ်-in ကိုများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာများကဲ့သို့အစစ်အမှန် Fiat ငွေကြေးတောင်းမည်ဟုပြော, အခြားသူတွေ ICOs နေ့စွဲရန်ရှိသည်အဖြစ် Bitcoin သို့မဟုတ်အီမရ.
top-tier အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုမ္ပဏီတွေစိတ်ဝင်စားမှုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ကြ, ဒါပေမယ့် Durov သူတို့ရဲ့ငွေသားလက်ခံသတိထားဖြစ်ဟု. တစ်ဦး Pre-ရောင်းချခွဲဝေများအတွက်တွန်းကြမှကောလဟာလသတင်းများအရတစ်ခုမှာမြဲမြံစွာ Mail.Ru Group မှဖြစ်ပါသည် (ယခင်ကပညာ,), ရုရှားထွက်ခွာသွား့ Yuri Milner တို့ကစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး. ပညာတစ်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကဤဇာတ်လမ်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်မှ reply ဘူး. စိတ်ဝင်စားစရာ, Mail.Ru Group မှ Durov ရဲ့နောက်ဆုံးကုမ္ပဏီ VK ဝယ်ယူတက်အဆုံးသတ်သောရန်ပုံငွေဖြစ်ပါသည်.
Durov ရဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုလုံးဝအသစ်အ blockchain ကိုဖွင့်ဖို့ဖြစ်တယ်, အဆိုပါကြေးနန်းရဲ့သုံးပြီး 180 ဒုံးပျံလောင်စာအဖြစ်အသုံးပြုသူသန်း cryptocurrency ချွတ်ခေတ်ရေစီးကြောင်းကလေးမွေးစားခြင်းသို့ရှေ့ကိုပါဝါနှင့်ကြေးနန်းအောင်မှ, ထိရောက်စွာ, အခြားအ cryptocurrencies တစ် kingmaker, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိစကေး၏.
TechCrunch ၏သုံးသပ်ချက်ကိုဝေမျှရှိကြောင်းကြေးနန်းရဲ့အဖြူရောင်စက္ကူအရ, ယင်း၏ cryptocurrency "Gram" ဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်နှင့်အလားအလာကြေးနန်း၏ချတ် app ကိုမှချည်ထားသောခံရသဖြင့်ချက်ချင်းခေတ်ရေစီးကြောင်းမွေးစားရဖို့နိုင်.
သတင်းရင်းမြစ် Durov ဗဟိုနှင့်ဗဟိုအခြေခံအဆောက်အအုံနှစ်ဦးစလုံးပေါင်းစပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပြောပါ, လုံးဝကျတ်ကွန်ယက်ကိုဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအချို့ဒြပ်စင်သည့်အဖြစ်အစာရှောင်ခြင်းတစ်ဦးအဖြစ်စကေးပါဘူးကတည်းက, ဤအရပ်မှအဘယ်ကြောင့် ကွေးနနျးစာ ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် blockchain ပိုင်ဆိုင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်.
ဖြန့်ကျတ် blockchain ပလက်ဖောင်းမှ Moving ကြေးနန်းဘို့တကျောက်ခဲနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်နိုင်. အဖြစ် app ကိုအထဲမှာ Full-လွ cryptocurrency စီးပွားရေးကိုကို, ဒါကြောင့်လည်းထိုကဲ့သို့အီရန်အဖြစ်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ-ပြည်နယ်များများ၏တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်စွပ်စွဲချက်များဆန့်ကျင်ပါကသီးခြားထားမယ်လို့, ဒါကြောင့်ယခုအကောင့်ရှိရာ 40% အီရန်နိုင်ငံ၏အင်တာနက်အသွားအလာပေမယ့်ယာယီအစိုးရဆန့်ကျင်တနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြပွဲများအကြားပိတ်ဆို့ခဲ့သည်.
ကြေးနန်းတိုင်းပြည်အတွက်၎င်း၏အသုံးပြုသူများအတွက်ကြိုးစားထိန်းသိမ်းထားဖို့နူးညံ့သိမ်မွေ့သောနိုင်ငံရေးအ balancing လုပ်ရပ်ကစားထားပြီး, အစိုးရက၏ပျက်စီးခြင်းအဘို့တောင်းဆိုတချို့ channel များကိုပိတ်ပစ်, ပွင့်လင်းအခြားသူများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့်.
WeChat သို့သော် Crypto နှင့်အတူ
တစ်တန်နှင့်အတူ, ကြေးနန်း WeChat ကဲ့သို့ပင်နိုင်ငံရေးပါတီများကင်းမဲ့ cryptocurrency-based utility ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ရည်ရွယ်, တရုတ်အများအပြားများအတွက် default အငွေပေးချေမှုယန္တရားအဖြစ်သို့ချက်တင် app နဲ့လုပ်ရပ်များထက်အများကြီးပိုငုံထားပြီးဖြစ်သော.
ငွေပေးချေမှုန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးများအတွက် WeChat အတွက်အလွန်လျင်မြန်စွာလုပ်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, စနစ်ကအရမ်းဗဟိုဖြစ်နေဆဲ. ထိုကဲ့သို့သောတစ်တန်အဖြစ်တစ်ဦးကကျတ်ပလက်ဖောင်းပိုပြီးလုံခြုံရေးနှင့်ခံနိုင်ရည်ပူဇော်နိုင်.
သတင်းရင်းမြစ်ကြေးနန်းအသုံးပြုသူများလာမည့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာနှစ်ဦးစလုံးကြေးနန်းရဲ့ငွေကြေးနှင့် Fiat ငွေကြေးကိုကိုင်ခွင့်ပြုပါရန်စီစဉ်ထားကြောင်းပြောပါ.
ကြေးနန်းပတ်လည်ထတည်ဆောက်ခဲ့သည်တည်ဆဲဆော့ဖ်ဝဲရေးသူဂေဟစနစ်လည်းရှိပါတယ်, bot တွေဟာနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို Third-party developer များကကမ်းလှမ်းတဲ့. တစျဖနျ, ဤနေရာတွင်တစ်တန်တတျနိုငျသ, သီအိုရီ, underlying အရာအားလုံးကိုတစ် developer ကြေးနန်းမှဆောင်တတ်၏.
တစ်ဦးအတွက် 132 စာမျက်နှာအဖြူရောင်စက္ကူ, ကြေးနန်းလေးဇာတ်စင်အစီအစဉ်ကိုဖော်ပြထားခဲ့ပါသည်:
"တစ်တန်န်ဆောင်မှုများ" ကျတ် apps များနှင့်စမတ်ကန်ထရိုက်များအတွက်ဖော်ရွေ interfaces များကဲ့သို့စမတ်ဖုန်းဖွကိုမဆိုမျိုး Third-party န်ဆောင်မှုများအတွက်ပလက်ဖောင်းဖြစ်လိမ့်မည်.
"တစ်တန် DNS ကို" အကောင့်မှလူ့-ဖတ်လို့ရအောင်အမည်များကိုတာဝန်ပေးဖို့များအတွက်ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါသည်, စမတ်ကန်ထရိုက်န်ဆောင်မှုများနှင့်ကွန်ရက် node များ. တစ်တန်နှင့် DNS နှင့်အတူ, ကျတ်န်ဆောင်မှုကိုရယူသုံးကဲ့သို့ဖြစ်နိုင်မည် "World Wide Web ကိုအပေါ် website တစ်ခုကြည့်ရှု။ "
"တစ်တန်ငွေပေးချေ" micropayments များအတွက်ပလက်ဖောင်းများနှင့်တစ်ဦး micropayment ရုပ်သံလိုင်းကွန်ရက်. ဒါဟာ "အသုံးပြုသူများသည် bot တွေဟာနှင့်အခြားဝန်ဆောင်မှုအကြားချက်ချင်းချွတ်-ကွင်းဆက်တန်ဖိုးကိုလွှဲပြောင်း" အတွက်အသုံးပြုခံရဖို့ရည်ရွယ်. စနစ်သို့ built အကာအကွယ်သောဤလွှဲပြောင်း "On-ကွင်းဆက်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာသကဲ့သို့လုံခြုံများမှာ" ကြောင်းသေချာစေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားပါသည်.
အဆိုပါ "တစ်တန် Blockchain" ဟုမာစတာကွင်းဆက်များထားရှိရေးနှင့် 2-To-The-ပါဝါ-of-92 ပူးတွဲ blockchains ပါလိမ့်မယ်. ၎င်း၏အသိသာဆုံးရှုထောင့်ကအပေါ်တွင်ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုအောင်မြင်ရန်တစ်ခု "Infinite Sharding Paradigm" ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ. ထို့ကြောင့်, တစ်တန် blockchains "ကိုအလိုအလျောက်ဝန်ပြောင်းလဲမှုများထားရှိရန်ခွဲထွက်ခြင်းနှင့်ပေါင်းစည်း" နိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ထား. ဤသည်အသစ်သောလုပ်ကွက်များလျင်မြန်စွာထုတ်ပေးလျက်ရှိသည်ဆိုလိုပေသည်နှင့် "ရှည်လျားစီတန်း၏မရှိခြင်းအနိမ့်ငွေပေးငွေယူကုန်ကျစရိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်, ပင် "ပလက်ဖောင်းသုံးပြီးန်ဆောင်မှုအချို့ကိုလွန်ကဲကဲလူကြိုက်များဖြစ်လာလျှင်.
အဆိုပါ blockchain ကကြီးထွားလာပင်အဖြစ်ထိပ်တန်းမြန်နှုန်းထိနျးသိမျးထားနိုငျဒါကြောင့်လည်းဒီဇိုင်း "လက်ငင်း Hypercube လမ်းကြောင်း" ၏ရှိရေးဦးမည်. ရှယ်ယာချဉ်းကပ်၏၎င်း၏အထောက်အထားကို 'ဘိုင်ဇင်တိုင်းပြတ်ရွေ့သည်းခံ' 'protocol ကိုတစ်မူကွဲမှတဆင့်သဘောတူညီမှုကိုရောက်ရှိပါလိမ့်မယ်, နောက်တဖန်တိုးမြှင့်အမြန်နှုန်းနှင့်ထိရောက်မှု. ထိုသို့ကိုလည်း 2-D ကို Distributed Ledger ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်. ဒါကတစ်တန်ဆိုမလိုအပ်သောချိတ်ရှောင်ရှားရန်မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်သက်သေပြခဲ့ကိုမဆိုလုပ်ကွက်၏ထိပ်ပေါ်မှာသစ်ကိုတရားဝင်လုပ်ကွက်ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်ဆိုလိုတယ်. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, တစ်တန် '' Self-သည်အနာပျောက်စေသော '' ဖြစ်ရည်ရွယ်.
အမှားသည်းခံ၏မြင့်မားသောဘွဲ့နှင့်အတူမျိုးစုံပါတီများအားဖြင့်လုံခြုံတဲ့ပြောင်းလဲနေသော '' အစုရှယ်ယာများ၏အထောက်အထား '' အပေါ်အခြေခံပြီးလိမ့်မည် blockchain Ton ရဲ့တတိယမျိုးဆက်. ဒါဟာအစ ID ကို၏သိုလှောင်မှုကိုကိုင်တွယ်လိမ့်မယ်, ငွေပေးချေမှုနှင့်စမတ်စာချုပ်များ. ဒါကြောင့်, အစားက၎င်း၏ငွေကြေးကိုဖန်တီးရန်အလုပ်၏အထောက်အထားအပေါ်မှီခို၏, ကြေးနန်းသစ်တစ်ခုအပေါ်အားကိုးလိမ့်မယ်, မူရင်း Bitcoin နည်းလမ်းထက်သတ္တုတူးဖော်ရေး cryptocurrency ၏လျော့နည်းစွမ်းအင် hogging လမ်း.
အဆိုပါပြောဆိုချက်ကိုကြောင့်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာတစ်ဦးစှာသာလွန်အရေအတွက်ကိုနိုင်စွမ်းဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်, လှည့်ပတ် 1 တစ်စက္ကန့်သန်း. တစ်နည်းပြောရရင်တော့, ဘာလင်ထဲက Polkadot စီမံကိန်း၏ရည်မှန်းချက်အလားတူ - ဒါပေမယ့်တစ်ခုထည့်သွင်းအခြေစိုက်စခန်းနှင့်အတူ 180 လူဦးရေသန်း. ဤသည်ကဒါခေါ် '' ပြောင်းလဲနေသော sharding '' နဲ့ '' interchain '' စေသည်.
အဖြူရောင်စက္ကူကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းဂရမ်၏ထောက်ပံ့ရေးလေးရာခိုင်နှုန်းသာကြောင်းစေသည် (200 သန်းဂရမ်) လေးနှစ်အင်္ကျီကာလနှင့်အတူကြေးနန်းရဲ့ဖှံ့ဖွိုးတိုးတအသင်းများအတွက် reserved ပါလိမ့်မည်. ကြေးနန်းမှာလည်းအနည်းဆုံး "ထိန်းသိမ်းထားဖို့စီစဉ်ထား 52 မှန်းဆကုန်သွယ်ကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ထိန်းသိမ်းရန်ဖို့ဂရမ် cryptocurrency ၏တစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ရေး၏ရာခိုင်နှုန်းကို ". ကျန်ရှိနေသေးသော 44 ရာခိုင်နှုန်းကိုအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကရောင်းချနှစ်ဦးစလုံးတွင်ရောင်းချလိမ့်မည်.
အဆိုပါငွေကြေးကိုပြင်ပဖလှယ်မှုအပေါ်စာရင်းနှင့်ကြေးနန်း app ကိုအတွင်းပိုင်းကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်.
အချိန်ကိုက်ပညာ, ယခုနှစ်ပထမသုံးလပတ်အတွက်ကြေးနန်းပြင်ပလုံခြုံတဲ့ ID ကို၏ပစ်လွှတ်မြင်ရပါလိမ့်မည်, တစ်တန်တစ်ဦး MVP အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်. အဆိုပါကြေးနန်းပိုက်ဆံအိတ်၏ပစ်လွှတ် Q4 ဘို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် 2018, နှင့် Ton-based စီးပွားရေး၏ဖန်တီးမှု Q1 အတွက်ဖြန့်ချိနိုင်တယ်လို့ 2019. အဆိုပါတစ်တန်န်ဆောင်မှုများ၏ကျန် Q2 အတွက်အတိုင်းလိုက်နာမယ်လို့ 2019.
အဆိုပါ crypto အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာတချို့ကတစ်တန်၏သံသယရှိနေဆဲ. "ကျွန်မဒီကြေးနန်းငွေဝင်၏ CEO ဖြစ်သူရဲ့နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ထင်, အများအားဖြင့်,"ဂျက်ဆင် Palmer ကပြောပါတယ်, အစောပိုင်း cryptocurrency ၏တည်ထောင်သူ Dogecoin.
Previous Post:Blockchain သတင်းများ 8 ဇန္နဝါရီလ 2018
Next Post:Blockchain သတင်းများ9ဇန္နဝါရီလ 2018